Global Voices teny Malagasy » Faha-10 taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:33 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika miora
Araka izay efa ahazoanareo sary an-tsaina azy, tena rempotra be mihitsy aho izao amin'ny asako ikendreko hanentana ho fampitomboana ny fahatongavantsain'ireo Gineàna bilaogera hafa amin'ny zavamisy sy ny tena maha-saropady ny Ebola. Noho izay indrindra, tsy hanao afa-tsy ny handika sy hametaka hafatra iray aho, avy amin'ny antsafa iray nifanaovako  tamin'i Davide Galati ary nadikan'i Louise Marsden ka navoakan'ny GV tamin'ny May 2013:
“Indray hariva izay, Desambra 2008, mbola tsy nitsahatra tamin'ny asako aho tamin'izany, mba tsy hifamaliana amin'ny vadiko momba izay zavatra hojerena tamin'ny fahitalavitra, nanomboka nikarokaroka tao amin'ny aterineto aho, hitady asa an-tsitrapo azoko tontosaina. Isan'ireo tranonkala latsaka teo ambany masoko ny Global Voices. Namaky lahatsoratra vitsivitsy aho ahy raiki-po tamin'izy ireny. Avy hatrany aho dia nifandray tamin'i Claire Ulrich, olona niadidy ny vondrona Frantsay ary nanomboka nandray anjara.
Talohan'izany aho dia tsy mbola nanana traikefa tamin'izay fanoratana bilaogy. Tsy mbola fantatro akory aza izay atao hoe lahatsoratra anaty Facebook, Twitter, mponin'ny aterineto, median'olontsotra, bilaogy. Ny hany mba traikefa nananako tany aloha dia ny famoronana vovonana firesahana ho an'ireo niharan-doza noho ny jadona tao amin'ny fireneko. Lasa bilaogera aho noho ny faharetana nananan'i Claire Ulrich, izay nanampy ahy hanangana ny Konakry Express [fr] , bilaogy iray natokana handefasana vaovao momba ireo fanitsakitsahana henjana nahazo ny zon'olombelona nitranga tao Ginea tamin'ny 28 Septambra 2009.”
Azoko atsofoka ihany koa ireo fahasarotana nifamatotra tamin'ny fitontongan'ny vinako fony aho nijery tamin'ny alàlan'ny fanalehibeazana ireo teny tao anaty rakibolana, sady nipetraka ihany teo amin'ny sezalava teo anilan'ny vadiko aho nijery fahitalavitra, sy ireo nifamatotra tamin'ny fampiasàna ny fitaovana tao amin'ny sehatry ny GV.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/21/141652/
 antsafa iray nifanaovako: https://globalvoicesonline.org/2013/05/27/from-guinea-to-italy-to-france-and-back-an-interview-with-blogger-abdoulaye-bah/